Quantum GIS, aragti hore - Geofumadas
Luulyo, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG, aragti ugu horeysay, qgis
Haddii ay saaxiibo yihiin gvSIG waxay ku dhaartaan ballanqaadkooda, Isniinta soo socota 27 ee bisha Luulyo waxaan lahaan doonnaa nambarka 1.9. Hadda imtixaanku wuxuu ahaa mid aad u weyn, sida ku cad mugga lagu qeexay liiska qaybinta. Inkasta oo soo gaaray on Monday, marka waxaan rajaynayaa in ay ku qanacsan tahay ee hambalyaynaya oofinta eraygiisa, kharash ku caymiska habeen hurdo la'aan in ay ku dhiirigelinayaan qaadeen, bal aynu eegno Quantum GIS iyo diyaarad shimbir cowbird.
QGIS waxaa lagu sameeyey C ++ iyadoo la adeegsanayo qalabka Qt, oo ku shaqeeya Windows, Mac iyo Linux. Mashruucani wuxuu ka bilowdaa 2002, iyada oo lagu taageerayo luqadaha 26 iyo ruqsaddiisu waa GPL.
Waxaan isku dayi doonaa nooca 1.02 ee iga tagay inaan ku qanacsanahay qalab bilaash ah, waa la soo dejin karaa laga soo xigtay waana tan bogga rasmiga ee Qgis.
Muuqaalka Quantum GIS
Naqshadeynta iyo naqshadaynta casriga ah waa kan ugu caansan, ma saameynayo waxtarka, laakiin waxay leedahay dhadhan shirkadeed (waxay iibisaa) marka ay timaaddo. Ka fikir in Waxaan horey u dhaleeceeyey ee gvSIG, sababtoo ah marxaladdiisa muuqaalkiisa iyo kala-sooc la'aanta hal-abuurka ayaa sababay maamulaha inuu i sheego "waxay u egtahay barnaamij hudheel ah, qaar ka mid ah jilayaasha ayaa u muuqda in lagu sameeyay Boostada 8".
Laakiin taasi muuqaal ahaan, QGIS waa mid aad u wanaagsan, xitaa adoo isticmaalaya guji sahlan oo aad kala dooran kartid 3 mawduucyada kala duwan ee astaanta sawirka aad u fiican, kaliya adigoo gudbinaya mawduuca mawduuca ayaa muujinaya sida ay interfacetu u egtahay.
Waxyaabaha xiisaha leh ee Quantum GIS
QGIS wuxuu u baahan yahay Grass waxqabadyo badan oo qalabku si fiican u xoojiyay, oo aad u wanaagsan, si aanay u ahayn dadaal badan. Markaad bilowdo QGIS oo aanad helin rakibid, kor u qaad feejignaan; kiiskan waxaan sameynayaa dib u eegis aan ku jirin Grass. Markaad rabto inaad gashato xogta Grass, sababtoo ah lama rakibin codsiga waa la xiray, markaa ma ku talineynin isticmaalka iyada oo aan rakibin labada qalab.
Miisaannada, Amarro badan oo amarro ah ayaa leh waraaq loo xilsaaray, si aad ugu dhajin kartid shaqadan adiga oo riixaya warqadan. Tani waa wax aad u macquul ah, waxaan xusuustaa in AutoCAD ay ahayd mid ka mid ah tabaha ugu fiican markii amar kasta oo lagu sameeyey kumbuyuutarka.
Tusmada guud, guddiga bidix waxaa jira khariid muujinaya meesha la geeyo, iyadoo labada dhinacba loo siman yahay. Aad waxtar u leh, waxaad dooran kartaa saqafyada aad rabto inaad aragto guud ahaan, waxaad kaloo u deyn kartaa sida daaqad lagu qiyaaso cabbir ka duwan.
Xuddunta dhinaca, kaliya aad u weyn, waxaad u jiidi kartaa plugins sida calaamadaha si hore loogu fiiqo, waa la samayn karaa, oo leh badhanka midigta ah ee dhaqdhaqaaqa ama deminta. Sidoo kale xayndaabka xayndaabku waa mid fudud oo aan fududeyn kaliya ee ku jira guddiga bidixda laakiin midka hooseeya.
Qeybta hoose, marka la muujinayo miiska sifaha, waxay u muuqataa aagga, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid daalan. Aad u shaqeynaya, ikhtiyaarrada si aad ugu dhejiso safka loo doortay iyo isbeddelka ballaadhanka iskudhafka leh jiiditaanka fudud ee fudud. Sidoo kale qaybta hoose waxay leedahay hawlaha baaritaanka iyo doorasho, oo la mid ah sida ay u leedahay Manifold GIS, marka laga reebo muraayadda heerka fudud.
formation of design interface taas oo ka dhigaysa mid aad u isticmaali karo, waxa iframe waa kan ugu fiican, i xusuusinayaa Microstation, sida in kiiska, sifooyinka uu furmo suuqa la gayn karaa iyadii oo aan saamayn ku hawlgallada kale.
Falanqaynta xogta, wuxuu leeyahay qaybaha asaasiga ah ee geoprocessing iyo cilmi-baarista in qof laga yaabo inuu u baahan yahay, marka hore marka la eego muuqaal aad u xiiso leh oo aan jeclahay in aan arko waqti kale, sababtoo ah FTOols ku jira waxaa ka mid ah qaabka dhulka, hydrological ka mid ah kuwa kale.
Kaalmo dheeraad ahLike codsi kasta gpl, aad faa'iido waa in plugins ah in si tartiib ah samaynta bulshada (inkastoo faa'iidaystaan ​​aadan in Java), by default keentaa aasaasiga ah iyo u muuqdaan kuwo yar laakiin aan sahlan sida ay u muuqato, loadable layers WFS, dhoofinta in MapServer, qabsadaan a duwo, ku dar taageero view sida woqooyi, baaxadda iyo copyright, text comma-xuduuddiisa leh, waxa uu leeyahay plugin SHP Converter dxf ah images georeferencing, gps Console, Console lagu tukan jiray, wadataa Roobka , iwm. Laakiin waxa ugu fiicani waa ikhtiyaarka ah in lagu dhejiyo khaanadaha Grass oo ah arrin gooni ah. La mid ah waxa ku dhaca gvSIG iyo Sextant inkastoo maturity ee Grass waa mudan, mid ka mid ah qalabka GIS ugu da'da weyn.
Waxa xiiso leh OGR Converter, kaas oo u bedeli karaan layers dhexeeya qaabab kala duwan, sida SHP, DGN, GPX, GML, CSV, KML, MapInfo iyo meel BD via ODBC, MySQL, PostgreSQL, iyo kuwo kale.
Kuwa ugu fiican: dxf ee shp iyo kml to dxf, asaasiga ah laakiin aan lagu sameyn barnaamijyada kale ee lacag bixinta.
Shaqooyinka aasaasiga ah, sida qalabyada kale, waxaad abuuri kartaa xuruufaha xayeysiinta, kooxaha lakabyada, lakabyada waxay leeyihiin ugu yaraan iyo xakamaynta ugu sarreysa, waxay fududahay in lagu daro nidaamyada isku xirka iyo saadaasha; haddii ay dhacdo shp, haddii ay qabaan prj, Qgis ayaa ka badbaadiya macluumaadkan. Nidaamyo fara badan ayaa ka mid ah barashada horumarka, taas oo aan u maleyno inay aad u fiican tahay.
Waa arrin aad u xiiso leh sida sifooyinka walxaha loo qaabeeyey, maaddaama isla guddi isku mid ah waxaa jira tabo loogu talagalay guryaha guud, calaamadaha, metadata, calaamadaha, ficilada iyo sifooyinka guud; wax walba waa la badbaadin karaa sida qaab .qml ah oo lagu rakibay si loogu dabaqo lakabka kale. Jadwalkani sidoo kale wuu socdaa, waadna hagaajin kartaa baaxaddeeda iyo dhererkeeda inay dhadhamiso. Xataa gudigan iyo kuwa kaleba waxaa loo furan karaa codsi gaar ah.
Waxa kale oo ay fiirinaysaa farsamooyinka u muuqda inay fudud yihiin laakiin ay leeyihiin adeeg aad u fiican, sida cabbirka masaafada joogtada ah, kaas oo ka muuqda guddi tabeel ah, oo ay ku jirto masaafada qayb kasta.
Helitaanka iyo macluumaadka xogta
Waxaad ku dhejin kartaa shp-ga, gml, Mapinfo iyo ddf, inkasta oo aad ka soo rogi kartaa xogta qaabab kale iyadoo loo marayo wareegtada OGR. Intaa waxaa dheer in lakabyada vector loo marayo WFS iyo PostGIS. Dib-u-dhiska, waxay kuu oggolaaneysaa inaad sheegto astaamaha cod-bixinta marka lakaliso lakabka.
Sida lakabka raajada, waxay taageertaa wax badan, marka laga reebo WMS. Waxaa intaa dheer, waxaa ka mid ah akhrinta OGC WFS, WCS, CAT, SFS, iyo heerarka GML.
Si loo abuuro lakabyo dheellitiran oo cusub ayaa lagu samayn karaa faylasha qaabka OGR ama Grass. Mashruucyada waxaa lagu kaydiyaa XML sida qgs kordhinta, halkaas oo isku xirnaanta layers lagu keydiyo qaabka gvSIG.
Sida tafatirka xogta, in mashruuca guryaha ku kaydsan yihiin caddaymaha sida habka dhidibada, unugyada, sax ah tobanle, awood tafatirka topological, awood ama la yareeyo geesoolayaashu isa ee lakabka isla iyo xaaladaha dhaqso ah (nooca iyo dulqaad) ee lakab kasta oo laga heli karo mashruuca. Arintaan waa mid xiisa leh, inkasta oo aan ka niyad jabay in kaliya uu leeyahay doorasho qeybta iyo vertex. Mar labaad, ubaxa waa inuu noqdaa mid sabab u ah.
Waxaan isku dayey inaan lakulo lakabka, galinta xayndaab, laakiin waxaan ogaaday in ay aad u qunyareyso, marka laga reebo baahida loo qabo in lagu daro xulashooyinka yaryar (waan ka xumahay runtayga, waa markii iigu horeysay ee aan ciyaaro ciyaaro). Waan arki doonaa markaan ka bato qalabka wax lagu qoro ee Grass. Miyuu u muuqanayaa inuu yahay jihada haddii dhowr qof ay isku dhajiyaan lakab isku mid ah, kaasoo ku guuleysta marka hore. ugh!
dhamaadka bixitaan degdeg ah, ikhtiyaarka lahayn ah si loo badbaadiyo view sida image ah, iyo plugin ah daabacaadda dhakhso ah, laakiin ka duwan gvSIG laha Layouts style ArcView gacanta; laakiin laxamiistaha print kuwaas oo u muuqda xoogaa qaaday by timaha, laakiin ku shuban kartaa dataframes, sumadaha, sanduuqyada iyo calaamadaha, iyo waxaad samayn kartaa dhowr darey mashruuc, waxaan helay waxaan iyaga ku badbaadin sida arrimo ah; buuggan wuxuu sheegayaa in ay suurtagal tahay. Waxaan u maleynayaa in fiilooyinka Grass waxaa jira waxyaabo ka fiican ujeedooyinkaas.
Dabcan waanu, ka dib subaxii xigta.
Post Previous«Previous Qiimaynta cadawga
Post Next Natiijooyinka 28 ee loogu talagalay qurxinta dabiiciga ahNext »
28 Jawaab ah "Quantum GIS, aragti hore"
Arnold Fernández Rivas isagu wuxuu leeyahay:
Hello, Waan fahamsanahay in ay tahay Freeware, hase yeeshee ma aha qayb Qgis ah oo ma aha Software Free sidaa daraadeed waxay noqon lahayd mid caqli gal ah in la sameeyo barta in blog ah. Ka dib marka ay u muuqato in inta hartay ay fiicantahay.
Waa kuwan sida aad rabto:
Alan S ' isagu wuxuu leeyahay:
Su'aashaydu waxay ku saabsan tahay cawska iyo qgis, waxaan kugu taasoo keentay in labada software, laakiin wax dhib ah oo aanad garanayn haddii la yareysey barnaamijka ama xaddidaadda aqoonta on my qayb ka, su'aashu waxay tahay, ma qgis ama cawska tafatirka module dheeraad ah oo buuxda ? Waxaan ula jeedaa jajabinta meesha ay ka shaqeynayaan, ama sida loo sameeyo tusaale ahaan istiraatiijiyadda buuxda ee deriska ah, wax ka hadlaya nooca caynkaas ah
rafa isagu wuxuu leeyahay:
Ma jiraa suurtagal in la sameeyo bakhshiile kala duwan qgis 1.7?
AutoDesk waxay leedahay arjiga aad ka soo dejisan karto bilaash, waxaa loo yaqaan 'realView', taas oo aad ku bedeli karto feylka dwg si dxf
arnoldfiarn isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u qoray sababtoo ah waxaan helay cinwaanka cinwaanka Venenux halkaasoo lagu sheegay in:
dwg: qaabka gaarka ah ee Autodesk, oo aan taageersanayn Quantum GIS / GRASS GIS.
Saaxiibada Hello, su'aalku waa kuwan soo socda, sidee baan u furi karaa faylasha fidinta ee fajacis ah ee Quantum Gis? Fikradda Dxf2Shp kaliya waxay la xiriirtaa nooca dxf.
Barnaamijyadan ayaa aqrinaya qaabka faylka nooca qaabka, haddii ay qaabkan tahay inaad haysato xogta ArcGIS. Waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah dib u dhiska mxd iyadoo loo marayo mashruuc u dhigma.
Haddii xogtaada ay ku jirto geodatabase, waxaad sidoo kale soo iibsan kartaa.
fiidkii wanaagsan ee iga caawin kara inaan ka guuro ArcGis ilaa Kosmo ama gvsig ama qalab bilaash ah, waxaan u baahanahay si degdeg ah sababtoo ah waxay u keentaa dhammaadka arrin aad u mahadsan.
emailkaygu waa ocampogiraldo@gmail.com
Waxaan raadineynayaa geeso badan iyagoo isticmaalaya WMS orthophoto oo saldhig u ah.
gvSIG: Sawirka sawirkiisu si dhakhso ah ayuu u socdaa, laakiin sawir-qaadista marka uu u socdo qotofoto waa miyir la'aan
Kosmo: Sawirka sawirkiisu aad buu u hooseeyaa, inkastoo ay u muuqato mid raaxo leh in la digitize
QGIS: Sidan oo kale sida Kosmo, oo aad ugu roon tahay in la digitize, sawirku wuxuu qaadan karaa sanado si uu u buuxiyo.
Dhibaato noocee ah ayaa dhici karta mid kasta?
Mashruuca 'Quantum GIS' oo leh qgs kordhin ah kuma jiraan wax, kaliya tixraaca lakabyada la yiraahdo. Sidaa darteed waxa aad ku dhexjirto waa inaad aragto sida loo beddelo lakabyadaas, oo laga yaabo inay qaab qaab u noqdaan faylalka degg ama dxf.
dani isagu wuxuu leeyahay:
Qofna ma yaqaanaa sida aan u gudbi karo faylka quantum ee AutoCAD?
Christian Gallor isagu wuxuu leeyahay:
si aad u soo qaadato sawir qaadashada sawir-gacmeed ee Spain waxaad isticmaali kartaa osm
FGGarcia isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sameeynayaa koorso internetka GIS ah oo ku yaal jawi sumeysan. Oo waxaan la kulmay dhibaato yar. Marka aan siiyo wax codsi ah oo leh ujeedo ah in la sameeyo lakabka raajada, waxaan xiraa barnaamijka.
Qofna miyuu leeyahay fikrad ah sababta ay u noqon karto?
Edu isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado halka laga heli karo CARTOGRAPHY DIGITALISED ee Spain (gaar ahaan Valencia) si ay ugu adeegsato barnaamijka QUANTUM GIS.
Fadlan, haddii aad wax xog ah hayso, ii sheeg ... Waxaan yaraa lumay ...
Gabriela isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, oo garan maayo haddii aad qorsheyneysid inaad ku darto module ah u arkaysid aan tenr noqotay shapefile tan iyo khadadka sumadaha iyo layers nooc, dhibcood, geesoolayaashu iyo sumadaha ku jira lakab oo kala duwan, inta badan waxay u baahan tahay aragti keliya oo kuwan la samaynaya tallaabooyin ayaa la qaadayaa
Waa inaad u beddeshaa qaabka faylka, aad tagto Plugins, ka dibna waxaad doorataa dxf2shp
Qofna ma yaqaanaa sida aan u furi karo faylasha dwg iyo dxf ee qadarka caanaha?
Waa inaad sharaxdaa dhibaatadaada:
Ma taqaanaa sida loo dhimo lakabka kml?
Ma fariin fariin ah?
Lakabka dusha ka saar dhinaca dambe ee dhinaca laakiin ma arkaysid walxaha?
Anigu ma gali karo faylasha kml ee ka mid ah version 5.0 ee google aquantum gis ah qof kasta ayaa iga caawin kara qummanka qadku waa 1.2
Haa, way taageerayaan. Qiyaasta fog, Qgis wuxuu si fiican ula shaqeeyaa Grass iyo gvSIG oo leh Sextant.
Hol, Waxaan doonayay in aan ogaado haddii barnaamijyadani sida Qgis, gvgis ama cawsku taageeraan faylasha taxanaha (shp, tab .......) waxaana lagu maamuli karaa dareemo fog?
Luxa isagu wuxuu leeyahay:
Hola mustaqbalkiisa ardayga Soi Geomatica kaliya ee dhirta aan ogaaday oo ku saabsan arrintan version cusub waa lacag la'aan, waxaan idinku soo dejin kartaa dhinacyada oo dhan la USB opsion wanaagsan ee ardayda aan odhan arday ah oo wanaagsan runtii aan guto noocyada 3 qalab d laakiin lagu daray QGIS waa in xoogaa la mid ah Argis iyo wanaagsan in geoprocessing mawduuca laga yaabaa kaliya sanka oo kayd fudud haddii uu jiro opsion ah halkaas oo ay ka dhigi kartaa naqdida a badan ... aver haddii aan u soo diri tusaale u ah sida ay u soo bixi images of dhulka google magacyada ee avenida..grasias ..
Taasi waxaad u socotaa:
Isku-diyaari / OGR-gawaarida / orodka loo yaqaan "OGR" lakin
Kadibna waxaad dooran kartaa faylasha asalka ah (ilo), doorashada kowlka, iyo ololka
Kadibna, hoostaada hoose dooro meesha aad ku socotid (goolka), oo dooro in aad u bedesho shp
su'aasha maalmo yar ka hor waxay ku xiran tahay qgis aan rabo inaan ogaado haddii ay suurtogal tahay in lagu badalo faylka kml ee shp iyo sida
Adigu waad saxsan tahay Tuxcan, xawaaraha habka Qgis waxaa loo arkaa inuu ka fiican yahay gvSIG. Si ay u noqdaan aalado bilaash ah, waxay wax badan ku soo korodhsadeen imikana kuwan ayaad la shaqeyn kartaa sidii inay tahay barnaamij gaar ah.
Tuxcan isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan runtii jeclahay labada gvSIG iyo mashruucyada Quantum GIS labadaba, kuwaas oo labadaba balanqaaday waxyaabo badan iyo tasiilaadyo hawlaha GIS. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood liidashada codsiyada JAVA, taas oo ka duwan mid ka mid ah dhexdhexaadinta QGIS, waa in la xoojiyaa. Waxyaabaha ugu weyn ee ku saabsan QGIS waa barnaamijkeeda Python ee barnaamijyada barnaamijyada mashiinka, isku xirnaanta GRASS GIS iyo taageerida noocyo kala duwan. GvSIG waxaan xoogga saarayaa shaqadeeda weyn iyada oo loo marayo SEXTANTE GIS iyo fursadaha ballaaran ee isku xirnaanta qalabka mobile, 3D sawireynta, daabacaadda, laakiin waxaan ku adkeeyaa LENGTH ka mid ah dilkiisa. Dhibaatooyinka labada qalab ayaa ah qaabka muraayadaha, sababtoo ah illaa iyo hadda wax yar ayaa loo baahanyahay. Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay haddii ay mararka qaarkood ay ku jiri karaan qalabka wax lagu qoro ee KOSMO ama OpenJUMP, oo aan helay aad u dhameystiran oo saaxiibtinimo.
Labada mashruucba waa kuwo aad u sareeya, waxaanay kor u qaadeen hab aan caadi aheyn oo ah barnaamijka GIS oo bilaash ah, taasuna waa sababta xorriyadda software, si aan u oggolaano in aan doorano qalabka ugu wanaagsan ee baahida uheli kara.
Nestor isagu wuxuu leeyahay:
Si daacadnimo leh, waa ku fiican tahay inaad hesho macluumaadka bartaada. . . Hambalyo ka yimid Patagonia Argentina